Relationship:- Qodobo jaceyl oo Taaban Kara Qalbiga Lamaanahaga!! | Arrimaha Bulshada
Home Dareen jaceyl Relationship Relationship:- Qodobo jaceyl oo Taaban Kara Qalbiga Lamaanahaga!!
Relationship:- Qodobo jaceyl oo Taaban Kara Qalbiga Lamaanahaga!!
Tuesday, June 22, 2021 Dareen , jaceyl , Relationship
Bulsha:- Waqti weliba aan xasuusto indhahaagi deeqsinimada jaceyl ka muuqatay wadnaheygu wuxuu kusii milmaa jaceylka aan kuu qabo ma joojin karo sida aan kaaga fikirayo wadnaheyga maalin walbo jeex siduu u milmayay wuu sii dhamanayaa markuu dhamado wadnahaada ayaan wadaago doonaa kuna wada noolaan doonaa !!!!!!!!
Xabiibi waxaan rajeyna adunyada inta aan ku noolahaya in aan quud iyo cabitaanba ka dhigan doono is dareensiibta jaceylka baaxada weyn leh ee inaga dhaxeeyo.
waxaa tahay ruuxii ugu horeyay ee qalbigeyga taabto, sunta aad ju buufisay qalbigetga dushiisa waxeey dishay dhamaan waxyaabaha xun sida naceyb, nabsi ,xumaan ,waxaad ku beertay oo waraabiskaagi kusoo baxay jaceyl dhab ah iyo ubaxyo guduud ah waan ku jeclahay qalbi!!!
Waxaan ifka ugu jeclahay subax weliba inaan laabtaada kazoo tooso ka dibna inta sujuuda iyo indhaha kaa shumiyo ku saaro garabkeyga ma doonayo aduunyadan intaan ku noolahay inaan ku waayo ee marnaba ha ii ogolaan inaan kala fogaano mcn!
Nolosheyda maalintaan aqli yeeshay illaa iyo hada malyuumaad qofood ayaan soo arkay lakin inta bini aadam aay indhaha qabanayeen waxaad ka noqotay ruuxa aan la dhacay nolosheydii hore oo idilna mar qura badalay wadnaheygiyaay sidee kugu iloobi karaa.
Hal jaceyl hal qalbi iyo hal qoys inaan wadaagno aad ayaan ugu faraxsanahay waxaad tahay wadnaheyga jeex ka mid ah sidaa awgeed mar weliba waxaan jeclahay inaan kuu barkiyo dhanka bidixda ee wadnaha waana ku tabayaa sharafe
Labadii ruux ee diyaarad iskula safarto waxeey ku qaadataa saacado ama maalmo in ay is ag fadhiyaan.
Labadi ruux ee dayax gacmeed kuwada safraa sanado ayeey ku qaadan kartaa labadeena waxaan doonaya inaan hal sariiri ku wada safarno inta nolosha ka dhiman……………
Nabad gelyo asxaabey tani iyo kulanti danbo
W/Q Abdirahman Mohamed Hassan